करण-कार्तिक झगडाको कारण पैसा र ब्रेकअप! :: Setopati
करण-कार्तिक झगडाको कारण पैसा र ब्रेकअप!
एजेन्सी मुम्बई, बैशाख १४
बायाँ कार्तिक आर्यन र दायाँ करण जोहर
दुई वर्षअघि 'दोस्ताना २' मा जोडिने बेला कार्तिकको पारिश्रमिक भारतीय रुपैयाँ दुई तीन करोड थियो जुन अहिले १० करोड भइसकेको छ। कार्तिकले सुरुमा करणलाई पारिश्रमिक बढाउन आग्रह गरे। फिल्म छायांकन भइसकेपछि पैसा बढाउने कुरा अव्यवसायिक लाग्यो। उनले कार्तिकलाई उनले अर्को 'मिस्टर लेले'को खेलाएर भनेर मनाउने प्रयास गरे। यो प्रस्तावमा कार्तिक पनि सहमत भइसकेका थिए।
स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएको बलिउड हंगामाले लेखेको छ, 'यसैबीच कार्तिकले कोभिड १९ का कारण 'दोस्ताना २' छायांकनका लागि समय दिन असमर्थ भएको बताउन थाले र करणले पनि खासै दबाब दिएनन्। तर जब कार्तिक धमाका फिल्मका लागि समय दिन थाले करण निराश बने। उनीहरुले भित्री बैठक बस्यो र करणले आफ्नो असन्तुष्टि पोखे।'
खबर अनुसार करणले कार्तिकलाई शरण शर्माको आगामी फिल्ममा सम्झौता गरेमात्र 'दोस्ताना २' मा काम गराउने शर्त राखे। एकआपसमा विश्वासको संकट बढिसकेको करणले स्क्रिप्ट र स्क्रिनप्ले लक नभइन्जेल ढुक्क हुन नसिकने बुझिसकेका थिए।
करणले अप्रिल २०२१ बाट 'मिस्टर लेले'मा विकी कौशल र जान्हवी कपुरका साथ कार्तिकलाई लिएर फिल्म छायांकनका लागि तयार भएको बताए। तर कार्तिकले यो समयमा दोस्ताना २ का लागि मात्र समय मिल्ने जवाफ दिए।
कार्तिकको यस्तो जवाफको आसय बुजेका करण कार्तिकसँग झोक्किए। उनी कार्तिकसँग साँच्चिकै दु: खी थिए किनकी जान्हवीले दोस्तोना २ र 'मिस्टर लेले'मध्ये एक फिल्म रोज्नुपर्ने भयो। यो मोडमा आइपुगेपछि करण र कार्तिकबीच कुराकानी हुन छोड्यो। करण र कार्तिकको सम्बन्ध बन्द कोठाबाट बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थाल्यो।
'कार्तिकको जान्हवीसँग ब्रेकअपका कारण उनीहरुको सम्बन्धमा पनि समस्या देखियो‍ र यसले ठूलो झगडाको रुप लियो। अन्तमा अरु झगडाजस्तै यो विवादमा पनि पैसा केन्द्रमा आयो। अरु सबै समस्या हल हुन्थे होलान् तर अव्यवसायिकताले समस्यालाई अर्कै तहमा पुर्याइदियो। करणसँग कार्तिकलाई दोस्ताना २ बाट बर्खास्त गर्नेबाहेक अर्को विकल्प रहेन,' बलिउड हंगामाले थप लेखेको छ।
कार्तिकको निस्कासनपछि 'दोस्ताना २' जान्हवी, लक्ष्य र नयाँ अभिनेताका साथमा बन्ने भएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८, १३:५८:००